Kutheni AmaNgina KaYehova Enxiba Kakuhle Xa Esiya Ezintlanganisweni?
Ngaba ukhe wayibona indlela amaNgqina kaYehova anxiba kakuhle ngayo xa esiya kwiintlanganiso zawo kule ncwadana inemifanekiso? Kutheni siyilumkela kangaka indlela esinxiba nesizilungisa ngayo?
Sihlonela uThixo wethu. Liyinyaniso lona elokuba uThixo akajongi imbonakalo yangaphandle. (1 Samuweli 16:7) Sekunjalo, xa sihlanganisene ukuze simnqule, sifuna ukubonakalisa intlonelo kuye nakwabo sinqula nabo. Ukuba besiza kuma phambi kwejaji kwinkundla yamatyala, besiya kunxiba size sizilungise ngendlela ebonisa ukuba siyamhlonela. Ngokufanayo, indlela esibonakala ngayo ezintlanganisweni ibonisa indlela esimhlonela ngayo “uMgwebi womhlaba wonke,” uYehova uThixo, nendawo esimnqulela kuyo.—Genesis 18:25.
Sibonisa imilinganiselo esiphila ngayo. IBhayibhile ikhuthaza amaKristu ukuba anxibe “ngokuthozama nangengqondo ephilileyo” njengabo ‘bahlonela uThixo.’ (1 Timoti 2:9, 10) Ukunxiba “ngokuthozama” kuthetha ukukuphepha ukunxiba impahla enokusitsalel’ amehlo, evez’ umzimba nevuselela inkanuko. Kwakhona, ukuba ‘nengqondo ephilileyo’ kusinceda sikwazi ukukhetha impahla engekho xazalala. Le migaqo ayisibandezi inkululeko yokuzikhethela. Inkangeleko yethu entle ‘inokuyihombisa imfundiso yoMsindisi wethu’ ize ‘imzukise uThixo.’ (Tito 2:10; 1 Petros 2:12) Xa sinxiba kakuhle kwiintlanganiso, sibangela ukuba abanye bakujonge njengento enzulu ukunqula uYehova.
Ungoyiki ukuya kwiHolo yoBukumkani ngenxa yokuba usithi akunazo iimpahla. Akufuneki ude ube neempahla ezibizayo okanye ezimbejembeje ukuze ufaneleke, ucoceke okanye ubukeke.
Ibaluleke kangakanani indlela esinxiba ngayo xa sinqula uThixo?
Yiyiphi imigaqo esikhokelayo kumba wokunxiba nokuzilungisa?